musha Africa Linda Ikeji Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeNigerian Blogger inozivikanwa kwazvo ne URL-www.windaikejisblog.com. Yedu Linda Ikeji Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezvinoitika zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hongu, munhu wese anoziva nezveblog rake iro rakaburitsa yakawanda yemoyo inobata pamwe nenyaya dzinovaraidza. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga yedu vhezheni yeLinda Ikeji's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Linda Ikeji Nyaya Yehucheche - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Linda Ifeoma Ikeji akazvarwa musi wa19 Gunyana 1980 kuna baba naamai Mr / Mr. Ikeji muNkwerre, Imo State Nigeria. Iye ndiye wechipiri pavana vanomwe vakaberekwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake Mai / Mr. Ikeji.
Nyika yeNigerian yekumadokero-kweAfrica dzinza rakazvarwa mumhuri yepakati-yemhuri yeKaturike iyo mhuri yavo midzi yakateerwa pasi kumabvazuva kweNigeria.
Linda Ikeji akarererwa kwaakaberekerwa kwaakakurira pamwe nevanin'ina vake izvo; Benita, Vera, Laura, Peks, Edna, naSandra Ikeji.
Kukura muNkwerre, Linda aigara achisangana neshamwari kuzotamba kana awana mukana wekudaro.
Akakurumidza kuve nechido chekutaurirana nevezera rake kuburikidza nekunyora sezvo aifara kuti akawana hunyanzvi hwekunyora mitsara yakapusa pazera diki.
Linda Ikeji Dzidzo Uye nebasa Kuvaka:
Pazera ramakore gumi, Linda Ikeji akange atove akanaka zvakakwana kunyora nyora-nyorwa-nyorwa uye aive atanga kunyora nyaya pfupi dzekufungidzira. Rudo rwake rwekunyora rwakaramba ruchikura paakazvikudziridza nekudzidza mutsva mazwi.
Akanyoresa kuLagos Anglican Girls Grammer Chikoro muSurulere achiri mudiki uye akapedza chikoro chesekondari pazera regumi nemanomwe raive rakakurumidza kutanga zvakakwana kune vadzidzi vaidzidza muma90s.
Kuda kwake kunyora kwakamupa chishuwo chisingadzimiki chekuda kuziva zvakawanda pamusoro pekushandisa chaiko kweshoko mukunyora.
Linda Ikeji Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Nekuda kwekuda kwake ruzivo uye kufadzwa nekugona kwake kuve mutapi wenhau, Linda Ikeji akafunga kufunda kukurukurirana kwevanhu vazhinji kuti afambisire mberi hunyanzvi hwake mukutaurirana pamwe nekumubatsira nyore kunyora zvinyorwa zvaizotumira ruzivo rwakakosha runogona kuchinja hupenyu hwevanhu.
Akakurumidza kunyoresa kuYunivhesiti yeLagos, kwaakapihwa kubvumidzwa kuti adzidze Mutauro weChirungu panzvimbo yekosi yake yekurota, Mass kutaurirana. Ndichiri kudzidza kuYunivhesiti yeLagos, Linda Ikeji akafunga kuisa hunyanzvi hwake hwekunyora mukushandisa chaiko.
Akatanga kunyora zvinyorwa zvevatengi vakasiyana avo vaimubhadhara iye vachimubhadharira masevhisi. Linda akakwanisa kuzviriritira kuburikidza nechikoro kubva mukufambiswa kwemari kwaakawana kubva mukunyora kwake. Iye zvakare akatora chikamu-chenguva mabasa ekumodhiza pamwe nekushandira sahweta kubatsira mhuri yake.
Linda Ikeji Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Mushure mekupedza kwake kudzidza kubva kuYunivhesiti yeLagos mu2004, Linda akatsvaga chikuva chiri nani chinogona kushandiswa kushambadza kunyora kwake kune nhamba yakakura yevateereri vake. Izvi zvakamuita kuti afambire mberi mukubloga izvo zvaakatora senge mutambo wekunakidzwa.
Sarudzo yake kublogi yakauya pamwe nemutengo muhombe wekubhadhara, aifanira kugara achiburitsa padandemutande uye aida internet inoshanda kuti adaro.
Zvichakadaro, mu2006 paakapinda kublogi, internet zvemagetsi nemakomputa zvaive zvisingawanikwe nyore muNigeria. Linda akatarisana nedambudziko rekugara achishanyira maresitoreti kuti aburitse kunyora kwake.
Linda Ikeji Biography - Kubudirira Nhau:
Nekuda kwekuti bhuku rake rakaburitsa zvakanaka kupfuura zvaaifungira, akatanga kushingairira kublogi mugore ra 2007. Pakutanga, akatanga kublogi achishandisa blogger sub-domain - Lindaikeji.blogspot.com uye akazomuwana domain - www.lindaikeisblog.com.
Linda Ikeji's blog yakava yake huru bhizimusi uye nzira yakavhurika yekuti iye apinde mune imwe mitsara yebhizinesi. Akagadzira yake yepamhepo terevhizheni terevhizheni, yepamhepo redhiyo nhepfenyuro chiteshi, pasocial network chikuva, uye mumhanzi chikuva pamwe nekutsigira vasikana vadiki vane hombe bhizinesi zvirongwa mugore re2016.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora, Linda Ikeji ndiye anonyanya kuzivikanwa blogger muNigeria anozivikanwa neake akasarudzika mablogi uye hunyanzvi hwekuita bhizimusi izvo zvakamupa mukana wekugamuchira mubairo weBest Entertainment Blog muNigeria Blog Awards NBA pamwe neWebsite / Blog yegore muNigerian Broadcasters Merit Awards mu2013.
Linda Ikeji akapihwa muAfrica Media Hunhu hweGore kumakundano e2019 African Achievers Awards ayo akaitirwa kuUK pazuva regumi nerimwe raJune 11. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Linda Ikeji Hukama Hupenyu:
Nezve chimiro chake chehukama, Linda Ikeji haasati akaroora panguva yekunyora. Anonzi akabatanidzwa nevarume vakasiyana muhukama hwepamoyo kubvira paakakwira mukurumbira.
Akanga achinyeperwa kuti akadanana nemutepfenyuri weFM akadzikama, Dan Foster uye zvakare mukurumbira wemamuvhi director uye mugadziri, Aquilla Njamah pamwe naDon Jazzy asi hapana kana chirevo chepamutemo chakaitwa naiye pasocial media nezve kusakundikana kwemakuhwa.
Kunyangwe Linda Ikeji asina kuroora kana kufambidzana panguva yekunyora, aive abereka mwana wake wekutanga uye wega - Jayce Jeremi.
Akange ave pamberi pekuzvarwa kwemwanakomana wake achitendwa kuti anga ari muhukama hwekudanana naSholaye Jeremi uyo anotendwawo kuve baba vemwana wake.
Hapana ruzivo rwakawanda nezvehukama hwake naSholaye rwakaziviswa kuruzhinji asi zvinofungidzirwa kuti shiri mbiri dzerudo dzakapedza nyaya yavo yekudanana sezvo vasisiri kudanana panguva yekunyora.
Linda Ikeji Hupenyu hwemhuri:
Linda Ikeji anobva kumhuri yepakati - yemhuri. Tinokuunzira chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba naamai vaLinda Ikeji:
Vabereki vaLinda Ikeji, Mr / Mai. Ikeji haana kuzviwana zviri nyore kurera mhuri yavo kusvika padanho ravari parizvino. Ivo baba vake naamai vakafanirwa kunyadziswa pane akati wandei nekuda kwematambudziko avo emari vachiri kurera vana vavo.
Vabereki vaLinda vakarwiswa nekutukwa pamusoro pe # 70 aine makore gumi nematanhatu. Izvi zvakaita kuti chitsidzo chake chishande nesimba uye asunungure mhuri yake kubva kuhurombo hwavaigara. Zvichitevera kukwira kwake mukurumbira uye mukurumbira, akavaka imba mbiri yekurara uye akatenga zvemhando yepamusoro. anotasva vabereki vake.
Nezve hama dzaLinda Ikeji:
Linda Ikeji ane vanin'ina vatanhatu vanoti; Benita, Vera, Laura, Peks, Edna, naSandra Ikeji. Anonyanya kuzivikanwa pakati pehanzvadzi dzake ndiLaura uyo ariwo blogger.
Sandra, mumwe wehanzvadzi yaLinda aive akatsigira zvikuru kambani yake sezvo aive agara achiperekedza Linda kubasa.
Linda akange amupa chipo cheBenz nekutenda basa rake rakaoma nerutsigiro mukuona kuti zvibodzwa zvaLinda zvakasimbiswa. Benita naEdna vava kugara muUnited States apo Peks, munin'ina chete waLinda anonzi anoseka uye anodawo hanzvadzi yake mukuru. Linda anga amupawo chipo cheHonda Accord sechipo chekuzvarwa muna2016.
Hapana ruzivo rwakawanda rwunozivikanwa pamusoro pasekuru naambuya vaLinda Ikeji pamwe nasekuru vake nasekuru nasekuru. Zvakare, kwanga kusina magwaro epamutemo kana kutaura pamusoro pababamunini vake, vanatete, babamunini, babamunini, nasekuru.
Kuti ndikupe iwe mufananidzo uzere wehunhu hwake, tinokupa iwe hupenyu hwehukama hwaLinda Ikeji. Akarumbidzwa pane akati wandei nenhengo dzemhuri yake semunhu akaropafadzwa neruzivo rwakawanda, huchenjeri, uye kunzwisisa.
Linda Ikeji ane hobby yakava budiriro yekusimudzira kwake meteoric mukurumbira aive aisa zvido zvake mukutsigira vanhu nehunyanzvi chaihwo hwaizovabatsira kuti vazvimiririre mune zvemari.
Akange atanga chirongwa chine dingindira; "Ndoda kuzviitira zvangu, Kwete, ndatenda" iyo yaive yakanangana nekutsigira vasikana vadiki mukati memakore gumi nemasere - makumi maviri nematanhatu vaive nemazano emabhizimusi makuru uye vari kuda kupinda mubhizinesi seye muzvinabhizimusi.
Linda Ikeji Mararamiro:
Linda Ikeji akakosha mari inofungidzirwa yemadhora 40 miriyoni panguva yekunyora. Kunyangwe hazvo paine matambudziko ekushayikwa kwemari yemagetsi yekufambisa zviitiko zvake zvezuva nezuva paudiki, Linda ave achiedza kushanda nesimba kuwana hupfumi hwese hwaan nahwo nhasi.
anorarama hupenyu hwoumbozha uye anga atenga imba inokosha # 556 miriyoni muBanana Island, Lagos uye akavakawo imba yekurara minomwe mutaundi rekwake muImo state. Anoda kuratidza hupfumi hwake nekutenga akasiyana mabhureki emota dzekunze.
Dzimwe dzedzake mota dzinosanganisira; # 108 miriyoni Bentley Mulsanne, Range Rover Sport 2014, Infinity FX 35, Toyota Sequoia, Toyota Camry, Honda Civic 2010 uye Honda Maererano.
Linda Ikeji Untold Chokwadi:
Kuputira nyaya yedu yeLinda Ikeji yehucheche uye biography, hezvino zvimwe zvishoma kana zvisingazivikanwe chokwadi pamusoro peiyo blogger iyo ichakubatsira iwe kuti utore mufananidzo wakazara wake.
Linda Ikeji akaberekerwa mumhuri yechiKatorike uye anotsigira kutenda kwake kwakazara uye kuvimba kwake. Akazvipira zvizere kune zviitiko zvekutenda kwake kwechiKristu uye anoedza nesimba kuti ararame maererano nekutenda kwake muna Mwari.
Kusiyana nevamwe vazhinji vanozivikanwa, Linda Ikeji haana kuona chero chinodiwa chekuinki nyoro paganda rake. Iye haatore matatoo seyambiro inodiwa inoratidza runako rwemunhu kana chinzvimbo chekuita.
Chimwe chezvikonzero chakakurudzira Linda Ikeji kuti arambe achishanda nesimba kuti akure kuve kurohwa uye kutuka kwakasvitswa kuvabereki vake nekuda kwe #70 paaive nemakore 16. Nekuda kwechiitiko chisina kunaka uye chinonyadzisa, Linda akapika kuti achapedza hurombo mumhuri yake uye akatanga kushungurudzika gore rakatevera.
Thanks for reading vedu Linda Ikeji Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Yeudiki Biography Diary- yeVANYORI VEMAHARA